Gaadiidka maalinlaha ah ee ka socda Metropolitan ilaa Saklıkent Ski Center | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaGaadiidka maalinlaha ah ee ka socda Metropolitan ilaa Saklıkent Ski Center
08 / 01 / 2020 07 Antalya, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Gaadiidka maalinlaha ah ee laga soo iibsado buyuksehir ilaa sakhiligada loo dalxiis tago
Talyaanigu waxay la kulmaan baraf. Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay bixisaa 7 maalmood oo gaadiidka dadweynaha ah oo lagu tago Xarunta Saklıkent Ski Center, oo kamid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka ee Antalya. 2 kun 400 dherer maalin kasta dadka deggan Antalya waxay ku raaxeysanayaan raaxaysiga barafka.
Qorsheynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya iyo Nidaamka Tareenka ayaa sii wadaya adeegyadeeda gaadiidka dadweynaha sanadkan si loo fududeeyo gaadiid ku taga Saklıkent. 50 kiiloomitir u jirta bartamaha magaalada, Saklıkent Ski Center ayaa si fudud loogu heli karaa gaadiidka dadweynaha.
Ka Bilowga Goobta Baska
Duullimaadyada, oo lagu qaado gaadiid dadweyne oo aamin ah oo aamin ah oo waafaqsan shuruudaha jirka ee Saklıkent, ayaa loo abaabulay 7 maalmood usbuucii si dadka Antalya ay uhelaan baraf. Khadku lambar 500 wuxuu ka tagayaa Antalya Bus Station 08.30 wuxuuna bixiyaa marinka Dokuma Park-Özdilek-Çallı-Medical Faculty-Uncalı Qabuuraha-Bahtali-Doyran iyo wadooyinka Saklikent Plateau. Khadku wuxuu ka soo noqonayaa Saklikent 15.30.
Goobta Saklıkent Ski Resort
Saklıkent diyaar u ah xafladaha dabbaasha